Etu aga-esi Mee 3KM-5KM mkpuchi mgbasa ozi FM. - CZH / Fmuser Fm Transmitter China Nye Nye Kpọtụrụ: lanyue whatsapp: +86 13602420401 SKYPE: lanyue99991
home » News » Etu aga-esi Mee 3KM-5KM mkpuchi mgbasa ozi FM.
Etu aga-esi Mee 3KM-5KM mkpuchi mgbasa ozi FM.
:Bọchị: 2017-05-19 / Atiya: News
Ndị na - ebugharị FMUSER FM ejirila ụwa niile maka nkwukọrịta. Simdị mfe nke iji otu sekọndị FM mere ka ọ bụrụ onye ama ama n’etiti usoro igwe nrụzi ndị ọzọ. Taa abịawo m sekọndọn ebugharị FM nke nwere ihe dịka 3 Km odika. Ihe osise eserese ahụ sara mbara ma enweghị m ike ịbanye na ibe weebụ a. Pịa na ya ka ịhụ nnukwu mkpebi mbipụta. Ka anyị banye n'akụkụ na-arụ ọrụ nke sekit a.
EGO KA WORR FORR TRR FM TRBARA FMUSER FM:
Enwere ọtụtụ ngwa na akụkụ dị na sekit a, yabụ m ga-eme ka nkọwa ahụ dị mfe dịka o kwere mee. Nke a bụ ezigbo mma na-ebugharị FM na-enwe oge kwụsiri ike nke oscillator gbanwetụrụ, nke bụ oscillators abụọ wuru gburugburu Q2 na Q3 na-arụ ọrụ na gburugburu 50MHz na mgbochi. A na-ewepụta nsị ahụ na ndị mkpokọta abụọ ahụ, ebe oge nke oscillators abụọ na-ejikọ iji mepụta akara 100MHz. Nke a ga - eweta nkwụsi ike karịa oscillators nkịtị na - ejedebe.
A na-emegharị mgbanwe ahụ site na ụzọ mkpịsị ugodi D1 / D2 na capacitors C8. Site na igbanwe voltaji nke agbara azu na varicap (dika ihe ntinye aka si di) i gha agbanwe ike ha, ya bu na onodi komputa nke ano. Nke a na - eduga ngbanwe ụda ugboro ugboro nke mgbama ntinye. Ihe omumu nke oscillator / modulator ogbo bu nri nye klaasị A na-egosi ọkwa ịkwọ ụgbọala jiri transistor Q4. A na - eme ka mgbapụta ọpụpụ sie ike site na iri nri klọọkụ igwe klas C nke e wuru gburugburu Q5.
Ugbu a na-eri nri mmepụta si Klas C ka obere ihe nzacha ngafe mere usoro nke Capacitors na Inductor. Emere nke a iji rụpụta ihe nkwekọ kacha nta na ntanetị ya na ntanetị tupu enye ya ya na antenna. Agbakwunyewo m ihe ngosi LED D3 nke na-egosi na ị na-ebugharị na ihe niile na-arụ ọrụ nke ọma. Ọ bụrụ na ọkụ anaghị enwu ọkụ mgbe ahụ ihe dị njọ na schematic. Nsogbu a na-aputakarị na akụkụ oscillator (naanị maka ndumodu). M jisiri ike wepu ihe niile agbanwe capacitors ma otu maka mgbanye, n'ihi na mbụ schematic nwere ọtụtụ ndị ọzọ agbanwe capacitors na ọ bụ ike tufuo ha niile.
AKW RKWỌ AKW OFKWỌ EKPERE:
Ike nke ihe mgbapụta na sekit FM bụ 2.5W. Na 2.5W FM mgbama nwere ike ikpuchi ebe dị anya 5 - 7 Km nke ezigbo anya. Na n'ọnọdụ kachasị mma, ọ nwere ike iru 10km odika. Ya mere ekwere m na ọ ga-adị mma ịsị na sekit a ga - ekpuchi 3 Km gafere ọbụlagodi n'okpuru oke ọnọdụ ma ọ bụ ọnọdụ kachasị njọ.
Ezubere sekit a maka sistemụ nnabata European FM ọ bụ ezie na ọ ga na-arụ ọrụ na America ọfụma, anaghị m n'aka ma ọ bụrụ na ọdịyo ahụ ga-adịgide. Nke ahụ sitere n'eziokwu ahụ ejirila m pusmphasis 50us nke bụ ụkpụrụ European na USA na-arụ ọrụ na 75us preemphasis.
Ihe ndenye PCB:
Mgbe ị na-ewu okirikiri a, ị ga-echebara PCB ole na ole ị kwesịrị iso. Ọ dị ezigbo mkpa iji ụgbọ elu ala karịa ụgbọ ala mgbe ị na-akụ usoro. Nke a na - eme ka ala ala na nkwụsi ike dịkwuo elu. Nwekwara ike iru balun tupu akara ahịrị eri nri site na iji coaxial 3 ma ọ bụ 4 na eriri ogologo 21 dị ogologo. N'ihi nke a ga -emepụta ọnya amịlị maka mpaghara eletriki na-asọ na mpụga nke eriri ahụ, wee gbochie ime ya akụkụ nke antenna ahụ, nke na-adịghị mma.
Ebidola ebugharị onye na-ebugharị n’enweghị ibu.
Y’oburu na ijikọtaghi antenna tinye tinye igwe nrụgide nke 50ohm na 2W (carbon, ọ bụghị ọnya waya) ma nwalee okirikiri gị.
Enwere m olileanya na unu niile ga-enwe obi ụtọ maka ọrụ a, nwalee nke a ma biputere nsonaazụ gị. Maka ajụjụ biko jiri igbe ikwu okwu dị n'okpuru, obi ga-adị m ụtọ ịza ya. Obi ụtọ DIY na-eme
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịzụta a onye na - ebufe fm ma wuo ụlọ ọrụ redio, nabata ịkpọtụrụ m. Injinia anyị ga-enye azịza.
«Nke gara aga: Etu ị gha esi melite Encoder maka Mgbasa Ozi Gị IPTV IPTV?
Ngwurugwu Video isii eji ama ama na ntanetị: UStream, DaCast, Livestream, Kaltura, Ooyala, na Brightcove :Osote "